7-da qaladaad ee ugu badan ee iOS 10 iyo sida loo saxo | Wararka IPhone
Dhowr maalmood ka hor iOS 10 waxay ku timid dhammaan qalabkayaga. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, noocyadan software-ka ah waxaa weheliya dhibaatooyin iyo khaladaad gaar ah oo si fudud lagu xallin karo. Taasi waa waxa aan maanta ugu tala galnay Actualidad iPhone, waxaan ku tusayaa 10ka khalad ee ugu badan ee ku jira macruufka 10 iyo sida loo hagaajiyo mahadsanid talooyinkeena. Nooc kasta oo ka mid ah macruufka 'iOS' wuxuu la yimaadaa muranno iyo khaladaad gaar ah, in kasta oo uu yahay nidaam qalliin oo deggan, haddana wuxuu leeyahay daciifnimo u gaar ah. Dhibaatooyinka WiFi, Bluetooth iyo xitaa aaladaha aan waligood cusbooneysiin, waxaan halkaan u joognaa inaan soo ururinno dhammaan dhibaatooyinka iOS 10 oo aan u helno xal fudud, ha moogaanin.
1 1. Codsiga Boostada ma helo emayl
2 2. Dhibaatada ku xirnaanta Bluetooth
3 3. Saamaynta muuqaalka ah ee barnaamijka Fariimaha ma ciyaaraan
4 4. Codsiyada waa la xidhayaa isla marka la furo
5 5. Taabashada Aqoonsigu kuma shaqeyso App Store
6 6. Calaamadda iTunes ka dib marka la cusbooneysiiyo iOS 10 iyada oo loo marayo OTA
7 7. Khalad casriyeynta barnaamijka
1. Codsiga Boostada ma helo emayl
Kadib cusbooneysiinta macruufka 10, waxaa jira isticmaaleyaal badan oo dhibaato ku qaba helitaanka emaylka dhanka Boostada, si kastaba ha noqotee, nasiib wanaag, waa dhibaato xalka. Dib-u-qaabeynta fudud ee nidaamka ayaa ka dhigi doonta inay wax walba si sax ah u shaqeeyaan markale. Kuwani waa tillaabooyinka la qaadayo:
Waxaan galnaa Settings si aan ugu dhaadhacno liiska "Mail".
Waxaan raadineynaa oo aan fureynaa cinwaanka emaylka ee dhibaatada nagu haya
Waxaan ka gooynaa koontada, ama waan tirtirnaa.
Waa inaad dib u qaabeysaa koontada bilowga, adoo kudaraya lambarka sirta ah iyo dookhyada
Waxaan ku fulineynaa farsamo isku mid ah koonto kasta oo saameyn ku leh
2. Dhibaatada ku xirnaanta Bluetooth
Qeyb kale oo muhiim ah oo isticmaaleyaasha ah ayaa dhibaato ku qabta xiriirka Bluetooth, gaar ahaan maxaa yeelay waxay si joogto ah u kala baxeysaa sabab la'aan, dhibaato aan sidoo kale xallin karno, ama sidaas ayaan rajeyneynaa Waxaan si fudud u leeyihiin in la soo celiyo goobaha network.
Waxaan galnaa Settings si aan mar dambe ugu gudubno tabta Guud
Marka aan gudaha galno, waxaan raadineynaa soo-celinta / dib-u-dhiska xulashooyinka
Dhammaan kuwa muuqda waxaan doorannaa "dib-u-dejinta goobaha shabakadda"
Hadda waa inaan sugnaa inta hawshu socoto, muddo ayey qaadan doontaa, laakiin ha ka welwelin, ma waayi doontid wax macluumaad ah oo la xiriira xagga sawirrada ama codsiyada. Doorashadan ma aha oo kaliya xalinta dhibaatooyinka caadiga ah ee Bluetooth ee iOS 10, laakiin badanaa Waxa kale oo ay xallisaa dhibaatooyinka WiFi ee suurtogalka ah. Waxaan ka digeynaa in dib u dejinta goobaha shabakadu lumiso furaha sirta ah ee iCloud Keychain.
3. Saamaynta muuqaalka ah ee barnaamijka Fariimaha ma ciyaaraan
Mid ka mid ah sheeko-cusboonaysiinta farriimaha cusub ee loogu talagalay macruufka 10 waa jilitaanno muuqaal iyo is-dhexgal ah. Intaa waxaa dheer, waxaan helnaa sheeko cusub sida istiikarada iyo falcelinta farriimaha, taas oo ka caawinaysa dadka isticmaala inay si fudud oo dhaqso leh ula xiriiraan. Si kastaba ha noqotee, adeegsadayaal badan ayaa ka faallooday shabakadaha aysan u soo diri karin ama u heli karin saamaynta Farriimaha ee iOS 10 Khaladaadka waxaas oo dhan waa shaqada "yaree dhaqdhaqaaqa". Waa run in awooddani ay wax yar hagaajiso waxqabadka qalabka, gaar ahaan haddii aan ka hadalno aalado duug ah, si kastaba ha noqotee, waxaan luminay qaar ka mid ah astaamaha nidaamka, sida kan.
Si aad u joojiso: Waxaan aadi doonnaa Dejinta, si aan ugu gudubno qaybta Helitaanka. Marka aan gudaha galno, sadarka labaad waxaan haysanaa ikhtiyaarka ah «Yaraynta Dhaqdhaqaaqa», kaas oo aan lahayn shiddo, laakiin beddelaad ah "Haa / Maya". Waxaan dooranay ka soo horjeedka wixii aan shaqeynay oo waxaan aadeynaa iOS 10 Messages si aan u aragno inay shaqeyneyso iyo in kale.
4. Codsiyada waa la xidhayaa isla marka la furo
Horumariyayaashu waxay si isa soo taraysa ugu dhegtaagayaan horumarka marka laga hadlayo nidaamka qalliinka, hase yeeshe, waxaa jira qaar ka cagajiidaya inay la socdaan wixii ku soo kordha. Waxaan helnaa, tusaale ahaan, kiiska Farriimaha PlayStation, Codsiga farriinta PlayStation kuma shaqeynayo iPad-ka oo leh iOS 10, isla markiiba wuu xirmaa markuu furmo. Codsiga ayaa dhowaan la cusbooneysiiyay si loo xalliyo dhibaatada.
Waxaa jira xalka caadiga ah, waa inaan hubinno in arjigu uu la jaan qaadayo macruufka 10, guud ahaan iyada oo loo marayo cusbooneysiintii ugu dambeysay, haddii aan heysano casriyeyn otomaatig ah waxaan baari karnaa qaybta ku dhex jirta App Store si aan u aragno haddii dhowaan la cusbooneysiiyay. Sida codsiyada dhacay, inta badan dhibaatadu waxay ku jirtaa xirmooyinka xogta, taasi waa sababta xalku waa in si fudud meesha looga saaro rakibaadda oo dib loo rakibo. Dhibaatooyinka noocan ah guud ahaan kuma soo baxaan codsiyada badanaa la isticmaalo, laakiin halkaas ayay ku jiraan.
5. Taabashada Aqoonsigu kuma shaqeyso App Store
Kadib markaad cusbooneysiiso macruufka 10 waxaad ogaaneysaa inaad wax ku iibsato App Store iyo waxay ku weydiineysaa lambarka sirta ah ee Apple ID, wax la soo dhaafay markii aad u baratay taabashada Aqoonsiga. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxay leedahay xal.
First of dhan waxaan aadeynaa Settings si aan ugu gudubno Touch ID iyo Code. Marka aan gudaha gasho waxaan hubinaynaa in barta "iTunes & App Store" ay shidan tahay iyo in kale. Haddii aysan ahayn, waad ogtahay waxa la sameeyo. Haddii ay wali shaqeyneyso oo aysan shaqeynin, waan ka saareynaa oo dib ayaan u dhignaa. Markaa waa inaan dib u bilownaa aaladda, oo aanan damin, laakiin ku riixeyna Guriga + Awoodda illaa toban ilbiriqsi. Sikastaba, xusuusnow in App Store uu ku weydiin doono lambarka haddii aadan wax iibsan 24-kii saac ee la soo dhaafay, ka dibna wuxuu ku weydiin doonaa mar kale Aqoonsiga Taabashada. Tani waa inay xallisaa dhibaatada aan tilmaameyno.
6. Calaamadda iTunes ka dib marka la cusbooneysiiyo iOS 10 iyada oo loo marayo OTA
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha isku dayay inay cusbooneysiiyaan OTA waxay heleen aaladda oo birta lagu duubay, taasi waa, waxay muujineysaa fiilo hillaac ah oo ay la socoto astaanta iTunes. Si loo xalliyo dhibaatadan ma lahaan doonno wax aan ka ahayn ku dheji kumbuyuutar PC / Mac leh iTunes oo furan markay muujiso astaantaas oo aad doorato "Soo celi qalabka" ama "Cusboonaysii qalabka".
7. Khalad casriyeynta barnaamijka
Haddii aad isku dayeyso inaad cusboonaysiiso iOS 10 adoo adeegsanaya OTA oo aad helayso pop-up oranaya "Cusboonaysiinta softiweerku wuu fashilmay" o «Cilad casriyeynta barnaamijka«, Qoraalka wuxuu ku sii socdaa«Khalad ayaa dhacay soo dejinta iOS 10«, Ha walwelin sidoo kale, waxay leedahay xal:
Sug ilaa laba saacadood inaad soo dejiso mar kale
Isticmaal iTunes si aad u cusbooneysiiso qalabkaaga
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » 7-da khaladaad ee ugu badan ee iOS 10 iyo sida loo saxo
Waxaan hayaa iPhone 5S mana lihi "Reset network settings" oo aniga ayay i dhigaysaa = Dib u celi dhamaan dejimaha ... Tirtir waxa ku jira iyo dejimaha ... Dib u deji dejinta ... Qaamuus ku celi ... Dib u celi shaashadda guriga. .. Dib-u-dejiso Goobta iyo ... Kee baa iyaga si sax ah u ah! DIB U QAADISTA SETTORS SETTS. waad ku mahadsantahay caawintaada
Ku jawaab andreuxe
Waa inay u soo baxdo sidii Andreuxe oo kale.
Waa inay la yimaadaan sameecadaha dhagaha Skullcandy
Ku jawaab Minerva Medina
Galab wanaagsan, dhibaatada ugu weyn ee aniga igu dhacda ayaa ah in codsiyo badan ay si dhakhso leh u xirmayaan macno la'aan, kiiska Muuqaalka, xitaa Xusuus-qorba waa horeyba ... Ma fahmin sababta.
Fadlan haddii aad caawin karto.
Jawaab si Luis Molina
Dhibaatooyin ayaan ku qabaa dhowr codsi oo waddani ah sida cimilada, caafimaadka iyo khariidadaha, in isla marka aan furo ay mar kale xirmaan, maxaan sameyn karaa si aan u xalliyo?
Kaliya waa inaad luqadda u baddashaa Ingiriis wax walbana way kuu shaqeyn doonaan. waa xalka kaliya ee dhibaatada lagu xaliyo.
Jawaab Lewis Anderson
Edward Munoz dijo
Sidoo kale Lewis wuu ku mahadsan yahay macluumaadka, cusbooneysiinta OTA ka dibna laga bilaabo xoqitaanka iTunes laakiin dhibaatada khariidadaha, cimilada iyo caafimaadka ayaa sii socota, hadda waxaan u beddelay luqadda Ingiriisiga wax walbana way shaqeeyaan ok!
Jawaab Edward Muñoz
Dhibaatooyinka ugu badan ee ka imanaya wixii aan akhriyay waxay i siinayaan inaan fahmo waa dhibaatooyin iswaafaqsan sababtoo ah cusboonaysiinta ka socota iOS 9 ilaa 10 haddii ay ka soo celiyeen iTunes oo ay qaabeeyeen wax cusub ma joogi doonaan meesha ka saarista barnaamijyada dhinac saddexaad ee aan taageerada haysan , Waxaan ka faalloon doonaa berri inaan helo iPhone 7 haddii dhibaatooyinkan ay soo if baxaan ombiamente waan u qaabeyn doonaa sidii cusub, runtii waxaan rabaa inaan tijaabiyo iOS 10 kaliya waxaan ku haystay beta 1 iyo 6S-dii hore.
Iima soo jeedinayso emojis marka aan farriin qoro. Xaaskeyga haa oo ma aanan helin wax farqi ah oo ku saabsan qaabeynta. Ma ogtahay waxa ay noqon karto?
Qofna waxba kama yiraahdo Pokemon Go! iyo macruufka 10 application Codsiga ugu badan ee la soo dejiyey sannadkan wuxuu si xun ula shaqeeyaa nidaamka cusub ee hawlgalka.
Kaba sii darane, cidina faallo kama bixiso tirada taleefannada iPhone ee leh dhibaatooyinka isku xidhka shabakadda, ee LTE MAYA WACYADA YIMAADDA IYO khadka internetka ee dilaaga ah. Nasiib wanaag waxaan awooday inaan dib ugu laabto 9.3.5.
Jose sosa dijo
Dhibaatadaas ayaan qabaa, LTE, qoraallada iyo wicitaannadu waa dilaa ... sidee ugu noqotay barnaamijkii hore?
Ku jawaab José sosa
Ma jiraa cid xal u heshay dhibaatada? gudaha LTE ma lihi internet.
Waxa aan ogaaday waa tan iyo markii aan cusbooneysiiyo illaa 10 macruufka ah in batteriga uu soconayo 20% LESS, ma jiraa qof kale oo dareema
dhibaato cusub miguel_hblog oo ka timid chile, https://www.youtube.com/watch?v=mNzuKMiz9n0
Jawaab ku bixi Matías González C.
WhatsApp markiiba wuu xirmaa markaan furo, sideen ku xallin karaa dhibaatada?
WhatsApp-kayga ayaan ka shaqeyn IPhone 4S-kayga lagamana saari karo, sidee ugu noqdaa qaybtii hore?
Subax wanaagsan, horay ayaan u sameeyay waxaad dhahdo si aan u xaliyo dhibaatada emaylka laakiin hada qaladka waxaa weeye inay jiraan emaillo aan soo muuqan, waxay u dhacdaa si aan kala sooc lahayn maadaama aysan ka imaanin soo diraha su'aasha laga qabo, xal ma jiraa? Aad ayaad u mahadsantahay
Edgar hore dijo
Habeen wanaagsan, waxaan haystaa taleefan iPhone ah waxaanan u cusbooneysiiyay macruufka 10, laakiin hadda Siri waa aamustay, ilama hadasho, igama dhageysato, aniga unbaa ii shaqeeya marka aan ku xiro samaacadaha dhagaha, fiidyowga kamaradda hore ma laha cod sidoo kale, haddii kale makarafoonku wuxuu ku shaqeeyaa sifiican wicitaanada iyo barnaamijyada kale. Mahadsanid
Ku jawaab Edgar forero
Ka dib markaad cusbooneysiiso iOs 10 ogeysiisyada La Vanguardia kama muuqdaan shaashadda, wax xal ah ma haysaa? Mahadsanid.
Waad salaaman tahay Laga soo bilaabo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee IOS waxaan dhibaato ku qabaa dhawaqyada. wax dhawaaqa ama gariir sameeyaa ma jiraan. Ma ahan wax adag, waan horay u xaqiijiyay. Maxaan sameyn karaa? Mahadsanid !!
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa iPhone 6s oo lagu daray, sida la sheegayo waa wax cusub (oo aan bilaabayo inaan shaki galiyo) markaan isku xiro samaacadaha dhagaha ayaa mugiisa kaligiis hoos u dhacayaa, hadii aan ahay WhatsApp, wada sheekaysiga ama wicitaanada waxay bilaabayaan inay furnaadaan aniga la'aantaa taabashada. Fadlan ii sheeg maxaan sameyn karaa?
IOS 10 ayaa iga dhigtay mid gaabis ah, waxaana horeyba u cadeeyay in aysan dhibaato kujirin wifi, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa aan sameyn karo oo hadii dib udajinta gabi ahaanba ay noqon laheyd ikhtiyaar wanaagsan? Wax walba waxay qaadanayaan waqti aad u dheer mana soo dejisan karo barnaamijyada oo cusbooneysiin karo
Ku jawaab Caterina Guerrero
Ka taxaddar: Allo, barnaamijka cusub ee farriinta ee Google, wuxuu la yimid ikhtiyaarrada asturnaanta ee naafada ah